व्यापार ब्यावसायमा नगदको जोखिम, नगद बीमा कसरी गर्न सकिन्छ ? – Beema News
व्यापार ब्यावसायमा नगदको जोखिम, नगद बीमा कसरी गर्न सकिन्छ ?
प्रकाशित मिति: २४ कार्तिक २०७४, शुक्रबार १२:३७
काठमाडौं । अधिकांश व्यापार व्यावसायमा नगदको अत्यधिक जोखिम रहन्छ चाहे त्यो प्रतिदिन बैंकमा जम्मा गर्दा वा बैंकबाट तलब दिनको लागि नगद ल्याइएको होस् अथवा संस्थाको परिसरमा मौजदात होस् । तपाईंको यस्तै जोखिमलाई नगद बीमा सुरक्षण गर्दछ् । नगद कारोबार गर्ने कुनै पनि संस्थाले नगद चोरी डकैती हुनेजस्ता सम्भावित दुर्घटनाका जोखिम कम गर्न नगद बीमा गर्न पाउने व्यवस्था हो ।
नगद बिमालेखले बैंक नोट, ट्रेजरी नोट, सुनको लाप्सा, गरगहना, एटिएमको रकम, सिक्का, बैंक ड्राफट, चेक, हुलाक आदेश, धनादेश, प्रमिसरी नोट, बिल अफ एक्सचेञ्ज, हुलाक टिकट तथा परिवत्र्य विदेशी मुद्राको बीमा गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ ।
दाबी भुक्तानी हुने अवस्था
बीमित वा बीमतले आफनो आधिकारी प्रतिनिधिको साथमा अन्यत्र पठाएको नगद चोरी, डकैती वा अन्य कुनै कारणबाट क्षति वा हानि नोक्सानी भएमा बिमकबाट क्षतिपूर्ति भुक्तान गर्छ । त्यस्तै, बीमितको परिसरभित्र रहेको नगद चोरी भएको अवस्थामा समेत यस योजनाले जोखिम बहन गर्छ ।
नगदका साथमा रहेका कर्मचारी वा आधिकारिक प्रतिनिधिवाट भएको बेइमानी, धोका र जालसाजीका कारणले भएको क्षति वा हानी नोक्सानीको ७२ घण्टा भित्रमा पत्ता लागेमा समेत दाबी भुक्तान हुनेछ् ।
दाबी भुक्तानी नहुने अवस्था
भूकम्प ज्वालामुखी, आगलागि वा अरु कुनै प्राकृतिक प्रकोपबाट हुने क्षतिलाई भने यस बिमा योजनाले दाबी भुक्तानी दिने छैन । त्यस्तै, वातावरणीय उथल पुथल, युद्ध, आक्रमण, विदेशी शत्रुको कारबाही, सैन्य विद्रोह, क्रान्ति, जंगी कानून, घेराबन्दीको स्थिति, भूलचुक, लेखा स्रेस्ताको गल्ती, बीमितले आधिकारिक व्यक्तिबाहेक अन्यलाई सुम्पेको लगायतका कारणले नगद हिनामिना भएका यस योजनाले क्षतिपूर्ति भुक्तानी गर्दैन ।
एउटा बिमालेखले एउटा मात्रै कार्यलयको रक्षावरण गर्न सक्नेछ । अर्थात् कुनै पनि बीमितको एकभन्दा बढी व्यावसायिक ईकाइ वा एकै व्यवसायका विभिन्न शाखा रहेको खण्डमा यो बिमालेख एक व्यावसायिक ईकाइका लागि मात्रै जारी गर्न सकिने व्यवस्था छ । त्यस्तै, बिमकले यस बीमालेखले बहन गर्ने जोखिमबाहेक अन्य जोखिम पनि बीमा गर्न चाहेमा बिमाशुल्क थप गरी जोखिम पनि थप गर्नसक्ने समितिले जनाएको छ । तर, बीमालेख जारी भइसकेपछि भने जोखिम थप गर्न पाइने छैन । साथै बीमा गर्दा बीमितले आफनो कार्यलय खुल्ने समय पनि बिमा सम्झौतामा उल्लेख गर्नुपर्नेछ । बीमितले आफूले बिमा नगरेको नगदको दैनिक अभिलेख राख्नुपर्नेछ ।